Mashaariicda Mashruuca Bursa Metro Weli Waa Sugitaan, Waxaa Lagu Saxiixay Konya Metro | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaMashaariicda Meeraha Bursa wali waa la sugayaa, Waxaa lagu saxeexay Konya Subway
04 / 11 / 2019 16 Bursa, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
mashaariicda bursa metro weli waa la sugayaa
Waxaad xaq u leedahay in aad Kentis tareenka ee dhaqaalaha dalka Turkiga, laakiin aan u dhiibay.
Ma tareenka dhulka hoostiisa ama tareenka xawaaraha ku socda ama mashruucyadaada nabadgelyada waddo ee aaminka ah ee u dhexeeya degmooyinka aan la dhammeystirin.
Shalay, saaxiib saaxiib ah oo ka walwalsanaa Bursa ayaa u soo diray emaylkeena.
Duqa Magaalada Konya ee İbrahim Halil Altay ayaa si sharaf leh u wadaagay akoonkiisa warbaahinta bulshada.
Saaxiibkeen wuxuu qaatay shaashadda sawirka qaybtaas wuuna nagu tuuray.
Necmettin Erbakan University oo ku taal Konya New Yyat Station Fetih Street Meram Dawlada Hoose Tareenka Nidaamka Wadada Dhismaha, Kordhinta Nidaamyada Electromechanical iyo Komishanka Howlaha iyo Bixinta Kastamka Gawaarida Tareenka ayaa la saxeexday xaflad u dhaxeysay Xarunta CMC Taşyapı Consortium.
Waqti raaxo leh oo loogu talagalay Konya.
Madaxweyne Altay wuxuu daqiiqaddan ugu dhawaaqay dhammaan muwaadiniintiisa kale ee warbaahinta bulshada sida soo socota;
Tik Waxaan u aragnay daqiiqad taariikhi ah magaaladeena. Saxeexnimada Konya Metro, oo ah maalgashiga ugu weyn ee gobolka taariikhda Konya, ayaa la saxeexay. Nasiib wacan Konya. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo Madaxweynaheena Recep Tayyip Erdoğan, Wasiirka Gaadiidka iyo dhammaan kuwa gacan ka gaystay howshan. ”
Been baan sheegnaa haddii aan nidhaahno maannu masayr lahayn.
Waxaan rajeyneynaa inaan tan la wadaagno maareeyayaashaada maxalliga ah.
I rumaysta, kama daalano qorista iyo sawirista. Waxaan sii wadi doonnaa qoritaanka anaga oo aan caajisin illaa iyo metrooga uu noqdo waxyaabaha aan ka fileynno oo ay gacmaheenna ku qabtaan qalin.
Nidaamyadeena ayaa sii wadanaya sidii muwaadin Bursa ka tirsan Wasaaradda Kaabayaasha iyo Gaadiidka, taas oo aan ka fiirsaneyn baahida Bursa.
Waxaan u gudbinnaa hadiyadeheenna xafiis kasta oo xafiis ah oo dayaca Bursa arrintan la xiriira.
31 bilood ayaa ka gudbay ballan qaadkii Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ee wadada tareenka ee Bursa, Terminal Tram Line iyo degmooyinka Mountain iyo wadooyinka ku yaal fagaaraha Gökdere ee Bursa bishii Febraayo ee la soo dhaafay ka hor Xilliga doorashada 9 Maarso.
Ma jiraan wax la taaban karo.
Ma jirin horumar muuqda oo laga dareemi karo mashaariicaha uu Madaxweynuhu laftiisu ku sheegay higsigayga.
Suurtagal maaha in la arko kooxaha Agaasinka Guud ee Maalgashiga Kaabayaasha ee Bursa.
Markii Ankara ka fogaato arrimahan, waxaa la fahamsan yahay in siyaasiyiinteenna iyo kuxigeennadeenu aysan waxtar yeelan karin.
Waxaan wajahaynaa caqabado xagga maamulka Ankara ah oo aan tixgelinaynin Bursa baahideeda saxda ah.
Nidaamka sharci-dejinta ee maamulka, oo Madaxweyne Erdogan uu had iyo jeer ka cawdo, wuxuu isu muujiyaa inuu iska caabiyey dalabka Bursa.
Waxaan dhihi karnaa in jabinta tani aysan macquul aheyn marka nidaamka la bedelo.
In kasta oo nidaamka dowladeed ee madaxweynaha, Ankara adag ee qabyo-qoraalka sharci darrada ah ay tahay nasiib darro weyn carqalad weyn ku ah rajooyinka saxda ah ee Bursa.
Ma ogin sida loo jabiyo tan.
Bursa ayaa sii wadi doonta inay sugto.
Intaas waxaa sii dheer, qiimahii ay dalka siisay waa la iska indhatirey.
Ankara, oo taageero siisa nidaamka tareenka Konya, Sivas, Erzincan iyo magaalooyin kale oo maskaxda ku soo dhacaya sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah, ayaa sii wada marinnada Bursa.
Haa, Bursa waxay leedahay layn Bursaray oo jira, laakiin Ankara ma leh qalin isku qaldan.
Waxaas oo dhan ayaa lagu dhammeeyay miisaaniyadda magaalada.
Amaahda muddada dheer ah ee reer Jarmal Kfw'dan Bursaray ee loogu talagalay dawladda hoose ee Magaalaweynta ayaa la bixiyaa si buuxda.
Maxaa dhacaya haddii ay wasaaraddu la wareegto Hillaac?
Dalku miyuu daadanayaa?
Iska dhego-tiris ku saabsan rabitaanka, cilladaha iyo mashaariicda Bursa ayaa ah caddaalad-darrada ugu weyn ee loo geystey magaaladan.
Waxaa intaa dheer, in doorasho kasta, magaalo ka mid ah dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee Turkey ayaa taageero celcelis ahaan in tallaabo.
Xigasho: İhsan Aydın - dhacdo
Mashaariicda maraakiibta ee Bursa
Maxaa ku dhacay Hillaac Metro